Indlela endiyilungiselelwe ngayo iMbasa yokuSebenza | Martech Zone
NgoMvulo, Oktobha 22, 2007 NgoMgqibelo, Oktobha 17, 2015 Douglas Karr
Kuqala yenza yonke imisebenzi elele ngaphakathi kubazali.
Emva koko, yenza nawuphi na umsebenzi ngezichazi okanye iiradicals.
Ukusebenza ukusuka ekhohlo ukuya ekunene, yenza konke ukuphindaphinda kunye nokwahlulahlula.
Okokugqibela, ukusebenza ukusuka ekhohlo ukuya ekunene, yenza konke ukudibanisa nokuthabatha.
Ukufaka oku kuphuhliso kulula kakhulu.
Operations within the parenthesis equates to my page layout, in a simple HTML format. I begin with a blank page and steadily populate it until it has all of the elements I'm looking for. To ensure flexible user interface design, I always work with XHTML and CSS. Naphina apho kukho amabinzana (okt. Isiseko sedatha okanye iziphumo zenkqubo), ndinika ingxelo ngekhowudi kwaye ndichwetheze isicatshulwa sedummy, imifanekiso, okanye izinto.
Okulandelayo, ndisebenza nayo nayiphi na into evakalayo okanye iiradicals. Le yimisebenzi yam yenkqubo okanye yedatha ekhupha, eguqula, kunye nemithwalo (i-ETL) idatha njengoko ndinqwenela ukuyibonisa kwiphepha lam eligqityiweyo. Ngokwenyani ndisebenza kumanyathelo alolo hlobo ngaphandle kokuba ukufomatha kwezona mbuzo zikhokelela ekusebenzeni okuphuculweyo.
Okulandelayo kukuphindaphinda okanye ukwahlulahlula. Kulapho ndiyenza lula khona ikhowudi yam. Endaweni yeskripthi esinye esikhulu, mna eqikelelwayo Uninzi lwekhowudi endinokubandakanya kuyo kubandakanya iifayile kunye neeklasi. Ngophuhliso lwewebhu, ndihlala ndisebenza ukusuka phezulu kuye ezantsi, kunjalo.
Okokugqibela, ukusebenza ukusuka ekhohlo ukuya ekunene, konke ukudibanisa nokuthabatha. Eli nyathelo yinkqubo yokugqibela, ukusebenzisa i-tidbits zokugqibela zokuqinisekiswa kwefom, izinto zesitayile, ukuphathwa kwempazamo, njl. Kwakhona, ndithanda ukusebenza ukusuka phezulu kuye ezantsi.
tags: izibaloindlela yokusebenzainkqubo
Oothixo beenkawu bathethile kwaye uScott Adams ubhala incwadi!
Okt 23, 2007 ngexesha 12:33 AM
Le yayiyiposti entle. Andizange ndicinge ngokufaka iodolo yokusebenza kwezinto kwinto enqabileyo njengophuhliso, kodwa nje ukuba uyicinge, uyabona ukuba bobabini babambekile ngendlela efanayo. Kuya kufuneka ndiyiphawule le kwaye ndiyisebenzise njengesalathiso. ;]
Okt 23, 2007 ngexesha 5:36 AM
Enkosi Stephen! Ndisebenza kwiprojekthi enkulu emsebenzini okwangoku evula iitafile ezininzi kunye namaphepha amaninzi ngokulandelelana okunengqiqo (zonke zidityaniswe kwiphepha elinye zisebenzisa iAjax) kwaye ndiye ndayiqaphela indlela endinononophelo ngayo kwaye ndaye ndagqiba kwelokuba ndibhale ngayo.